नम्रताले दर्शकलाई चाँडै नै प्रसाद खुवाउने
नेपाली कथानक चलचित्र प्रसाद अब दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन । एक दम्पतीको प्रेमकथा र निसन्तान हुँदाको आरोहअवरोहमा आधारित भनिएको प्रसाद को छायांकन सुरु भएको छ । राजधानीको काँडाघारीमा सोमवार छायांकन थालिएको फिल्मलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन । विपिन कार्की र नम्रता श्रेष्ठले दम्पतीको भूमिका निर्वाह गरेको फिल्ममा निश्चल बस्नेत..
नायिका सञ्चिता पुगिन बुटीक उद्घाटनमा,भूमिज कलेक्सनको शाखा कुपण्डोलमा पनि
भूमिज कलेक्सन एण्ड बुटीकले कुपण्डोलमा आफ्नो दोस्रो शाखा बिस्तार गरेको छ । काठमाण..
निताले म्यासेज रिप्लाई नगर्दा एक फ्यान दुर्घटनामा परे
नायक र नायिका भन्ने वित्तिकै दर्शकले रुचाएका पात्र हुन । हिरो या हिरोइनले के खान..
बरिष्ठ कलाकार थापाको निधन
काठमाडौ, ३० जेठ । वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको ९३ औँ वर्षका उमेरमा आज बिहान २ ..
भान्जीलाई गीतबाटै कुमारको सलाम
हास्यव्यंग्य गायक कुमार न्यौपानेले ‘सलाम मामा सलाम’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका छन्..
अन्जना र पुष्पाले खोले बौद्धमा आधुनिक अर्गानिक कफी एण्ड जुस बार
अर्गानिक खानाको पारखीहरुको लागि काठमाडौँको बौद्धमा आधुनिक कफी एण्ड जुस बार खोलिएको छ । एक कार्यक्रमका बीच चर्चित नायिका संचिता लुइँटेल, गायक धिरज रार्इ, विश्वको नै कान्छा चलचित्र निर्देशक सौगात बिष्ट, मोडल संजय राजविक्रम लगायतले आधुनिक कफीको उद्घाटन गरेका हुन । सम्पूर्ण प्रकार तथा परिकारको अर्गानिक कफी, अर्गानिक जुस तथा अन्य लाइ..
हरर मुभि सुनकेसरी आजदेखि प्रदर्शनमा
नायिका ऋचा शर्माद्धारा निर्मित नेपाली चलचित्र सुनकेसरी आजदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । हरर जनराको उक्त फिल्मका दृश्यहरु प्राय अस्ट्रेलियामा सुटिङ गरिएको हो । प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा सुनकेसरीको बिहीवार साँझ ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा प्रिमियर सो गरियो । ८० मिनेट लामो फिल्म हेरेपछि दर्शकको तारिफ बटुल्न सफल भएको छ । तर हलहरुमा लागेको यो ..
हिरोइन दीपिका प्रसाई व्यवसायिक रेकर्ड राख्न सफल छक्का पञ्जा टिमसँग काम गर्ने भएपछि निकै खुसी छिन । छक्का पञ्जा ३ मा दीपिका औपचारिक रुपमा अनुवन्धन भएपछि दंग छिन । उनको यो टिमसँग काम गर्न भने अर्की नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मीले जुराएकी हुन किनकी उनलाई फिल्म टिमले खोजेपनि वास्ता गरिनन । यस लगत्तै दिपिकाले यो फिल्ममा काम [&helli..
खोसेर मेरो आवाज तिमीले गायौ राष्ट्रगान डाम्यौ मेरो चेतनामा तातो पन्यु लुट्यौै— मेरो प्रिय माटो र, बनायौ मलाई— आफ्नै देशभित्र अनागरिक......!
सिर्जनात्मक लेखन कार्यशालाले मानिसलाई सिर्जना गर्ने भावना जगाइदिन्छ । पानी त आकाशबाट पनि पर्छ र जमिनमुनिको निश्चित सतह छिचोल्दा पनि आउँछ । हामीले खाने पानी त त्यही जमिनमुनिकै हो । जमिनमुनिको पानीको सतहसम्म बोरिङ गाड्यौं भने जमिनमुनिबाट पानी आउँछ । सिर्जनात्मक लेखन कार्यशालाले नलेख्नेहरुलाई जमिनमुनिको पानीको त्यही सतहमा लगेर छुवा..
जान्दा जान्दै पनि इन्द्रकमलले आफ्नो दुवै हात फैलाउँदै प्रोफेसरको स्वागत गर्छे । प्रोफेसर चुपचाप उसको घरमा प्रवेश गर्छन् । इन्द्रकमलले प्रोफेसरलाई नियालेर हेर्छे । उनको आँखामा एउटा मानसिक थकान देखिन्छ ।
गत वर्ष मात्रै ‘विन्दुहरू’ नामक कविता सङ्ग्रह निकालेकी गीतकार ढकालले उक्त गीत आफ्ना दिवंगत पिता बालकृष्ण अधिकारी ‘धनकुटे’को स्मृतिमा रचना गरेकी हुन् । गीत रेकर्डिङका क्रममा गायिका अमात्यले ‘आमाबारे धेरै गीत लेखिए पनि बुबाबारे सम्भवतः पहिलो गीत भएको’ भन्दै आफू अत्यन्तभावुक भएको बताएकी थिइन् ।
‘तपाईँहरूले मैले गर्न नसक्ने कुरा माग्नुहुन्छ कि भन्ने डर लागेको थियो । यो समस्या त मेरा लागि केही होइन, बायाँ हातको खेल हो यो । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, भोलिदेखि नै चोरीचकारी सबै बन्द हुन्छ । तपाईँहरूले भोलिबाटै ढोका, दराज, सेफ, बाक्सामा ताला लगाउन नपर्ने गरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिदिने छु ।’ गाउँलेका कुरा सुनेपछि भर्खर निर्..
बागबजारको सडकमा बराबर एक जोर मान्छे हिंडेका देखिन्थे । एक जना निकै अग्ला, डम्म जिउडाल भएका र अर्का चाहिँ निकै होचा, दुब्ला पातला थिए । त्यो चल्तीको सडकमा तिनलाई देख्नेहरू भन्थे ‘लौ डण्डीबियो आउँदैछन् ।’ ती अग्ला मान्छे बालचन्द्र शर्मा डण्डी र होचा मान्छे राजेश्वर देवकोटा बियो रहेछन् भनेर पछि थाहा भो मलाई । मान्छे अनुसारको कस्तो ..
यसरी फर्कदा जन्म गाउँमा लामो अन्तरालपछि खाटा बस्दै गरेको घाउ कन्याएझैं गरिरहेछु अनुभव लगातार पीडा र आनन्दको र, सोच्दै छु— के म साँच्चै अपराधी हु ?
उक्त गीतमा सुरज गैरे विवशको शब्द रहेको छ भने अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको । सो गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन रत्न जोशीले गरेका छन् भने छायाँकन र सम्पादन दीपक बोम्जनले गरेका हुन् । विन्ध्यवासिनी म्युजिकले बजारमा ल्याएको सो गीतमा गायक–गायिका युनिक र मायाका साथै प्रेम श्रेष्ठ र सुजिता नगरकोटीले अभिनय गरेका छन् ।
गोजीबाट डाँक्ला झिकेर बाँड्दै पोखरी माइलाले भन्यो–“लु, अब धुवाँ उडाउन त खोइ र आगो पनि छैन । बस्तु पनि ठुलेले छोडिदिएछ । चकचकाइ सकेपछि थामिन्छन् र यी साँढेहरू ! यी डाम्नाहरू ! अँ ! कुरा के भने गाउँमा फलामजस्ता लक्का जवानहरू पनि छन् । तिनलाई पनि सम्झाउनुपर्छ । हुन त म पनि त्यति धेरै कुरा जान्दिन र पनि हामी गरिपजति, सम्पत्ति नहुनेज..
गोविन्द नेपालका दुई कविता
यौटा लाचार बाबू चौबाटोमा धुमधुमति उभिएर आफ्ना छोराछोरी साहित्य,कला,संस्कृतिको भविष्य कल्पिरहेझैँ लाग्छ जबजब म कमलादी पुग्छु
चन्द्रागिरिमा रमाए भारतका चर्चित गायक कुमार सानु
सानुले चन्द्रागिरि भ्रमणबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्वच्छ वातावरण तथा हिमालको काखमा आउन पाउँदा धेरै खुसी भएको बताए । ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको चन्द्रागिरि डाँडामा उक्त कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर चन्द्रागिरि डाँडालाई एकीकृत पर्यटक..
गोविन्दको ‘कुलकुल’ सार्वजनिक
सो एलबम विमोचन समारोहमा गीतकार संघका अध्यक्ष चूडामणि देवकोटा, संगीतकार सुरेश अधिकारी र गीतकार सिवाकोटीलगायतले नेपाली गीत–संगीतबारे चर्चा गरेका थिए ।
मेरो प्रिय लेखक आफूमाथि लागेको बुर्जुवा लेखकको धब्बालाई मेटाउँन लगातार जेनुइन्जेनुइन् कथा रचिरहेछ । प्रकाशन पूर्व उसका सबै कथाहरू मलाई पढ्न दिन्छ । यतिखेर म उसको कथाका अप्रकाशित अवस्थाको पहिलो पाठक भएको छु ।
अनिल श्रेष्ठका दुई कविता
यस्तै जाडोको एकदिन जुलुसमा हिँड्दाहिँड्दै यिनीहरुका बाउआमाको ज्यान गयो ऊ त्यो भित्तामा टाँगेका फोटाहरुमध्ये दुई जना यिनीहरुकै बाउआमा हुन् सहिद भए भन्छन् दुवै जना गिट्टी कुट्ने काम गर्थे हजुर कहिले बालुवा चाल्थे कहिले इँटा भर्थे
महन्थ, राजेन्द्र र महेन्द्रको गृहजिल्लामा बढ्दै एमालेको चुनावी रौनक
एमालेले भने ठाकुरको नगरपालिकामा उम्मेदवार उठाइसकेको छ । एमाले सर्लाही जिल्ला कमिटीका सदस्य चन्द्रिका सिंह चुनाव भए मेयरमा उठ्दैछन् । काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले उम्मेदवार उठाउन जाँगर नचलाइरहेको बेला एमालेले भने राजपाका ६ नेतामध्ये तीन नेताको गृहजिल्ला सर्लाहीमा उम्मेदवारहरुको अन्तिम टुंगो लगाइसकेको छ ।